I-titanium dioxide enobunzima engama-606
Inkcazo yemveliso: I-YMR-606 yi-rutile titanium dioxide, ethe yanyangwa ngaphezulu komhlaba yaza yadityaniswa ne-silicon aluminium oxide. Le mveliso inobumhlophe obugqwesileyo, ukusasazeka okubalaseleyo, amandla amakhulu okupeyinta, ukumelana nemozulu ephezulu kunye ne-gloss.
I-Anatase titanium dioxide 110
Inkcazo yemveliso: I-YMA-110 yi-anatase titanium dioxide. Le mveliso ine-gloss elungileyo, ubumhlophe obucocekileyo, ukufunxeka kweoyile, amandla aphezulu okusasazeka, ukusasazeka okuphezulu, ukusasazeka okuhle, umxholo wokungcola okuphantsi, iyunifomu kunye nokuhanjiswa kobungakanani bamasuntswana.
I-Lithopone emhlophe umgubo omhlophe BA311 luhlobo olutsha lwe-Lithopone olungumgubo, olunezimpawu zobumhlophe obuphezulu, amandla afihlakeleyo okufihla, ukucoceka, ukumelana nobushushu obuphezulu kunye nokuxhathisa kwemozulu okomeleleyo kune-lithopone yesiko.
Ubumhlophe obuphezulu beLithopone BA312
Umgubo omhlophe omhlophe weLithopone powder BA312 luhlobo olutsha lwe-non-toxic, non-pollution green Lithopone powder. Isetyenziswa ngokubanzi kwimarike kunye nezibonelelo zobumhlophe obuphezulu kunye namandla aphezulu okufihla. Isekwe kwi-BA311 kwaye iyaqhubeka ukuphucula amandla okufihla imveliso. , Ukusasazeka, kunye nokumelana nemozulu. Le mveliso iqulethe i-amphoteric oxides: i-silicon, i-arhente yokugubungela i-aluminium, ukumelana nemozulu eyomeleleyo, anti-tyheli, ubumhlophe obuphezulu, ukusasazeka okuhle, ubungakanani beesuntswana ezifanayo, amandla okushicilela anamandla kunye namandla okusombulula, akukho lula ukusasaza tyheli.
I-B301 Lithopone yiLithopone ejolise kwinjongo ngokubanzi, umgubo omhlophe ngembonakalo, ongenabungozi, ongenancasa, ongenabumba, ongenakunyibilika emanzini, ozinzileyo ngekhemikhali nonokuthintela ialkali, kwaye ukhupha irhasi yeH2S xa idibana neeacidi.
I-B311 I-Lithopone powder yinjongo-jikelele yeLithopone powder enembonakalo emhlophe. Ngokusekwe kwi-B301, i-B311 iphucula amandla okufihla kunye nokusasazeka komgubo weLithopone. Inokuqina okuzinzileyo kweekhemikhali kunye nokusasazwa kobungakanani bamasuntswana. Umbala omhlophe osekwe kwi-titanium dioxide.
I-Kaolin yiminerali engeyiyo yentsimbi, uhlobo lodongwe kunye nodongwe olulawulwa zii-kaolinite kunye nezimbiwa zodongwe. Inezinto ezintle zomzimba kunye neekhemikhali ezinje ngeplastikhi kunye nokumelana nomlilo. Inokusetyenziswa okubanzi, okusetyenziswa ikakhulu ekwenzeni iphepha, iiseramiki kunye nezinto ezinqabileyo, kulandelwa ukutyabeka, ukugcwalisa irabha, iiglasi zekhephu kunye nezinto zokwenza izinto zesamente ezimhlophe, kunye nexabiso elincinci leeplastiki, ipeyinti, imibala, amasondo okusila, iipensile, yonke imihla izinto zokuthambisa, isepha, izibulali zinambuzane, amayeza, amalaphu, ipetroleum, imichiza, izinto zokwakha, ukhuseleko lwesizwe namanye amacandelo emizi-mveliso.
Ukucoceka kwahlulwe kwayi-325 mesh, i-600 mesh., 800 mesh, 1250 mesh, eyenziwe ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi.
I-Kaolin yiminerali engeyintsimbi. Luhlobo lodongwe nodongwe olulawulwa ziiminerali zodongwe lwe-kaolinite. I-kaolin emsulwa imhlophe, intle, ithambile kwaye ithambile, ineplastikhi elungileyo kunye nokumelana nomlilo. Isetyenziswe ikakhulu ekwenzeni iphepha, iiseramikhi nakwizinto ezinqabileyo, kwaye okwesibini zisetyenziselwa ukuhombisa, ukugcwalisa irabha, ii-glazes ze-enamel kunye nezinto zesamente ezimhlophe.
I-Iron oxide emnyama
I-oxide yentsimbi ingumgubo ngenkangeleko, enemibala ebomvu, omthubi, omnyama, oluhlaza, njalo njalo, kwaye ineempawu ezintle zomzimba kunye neekhemikhali. Amandla okufihla ngamandla, amandla aphezulu okushicilela, umbala othambileyo, ukusebenza okuzinzileyo, ukumelana nealkali, uzinzo kwi-asidi ebuthathaka kunye ne-asidi enqabileyo, ukumelana nokukhanya okuhle, ukumelana nemozulu, ukunganyibiliki emanzini nakwinyibilikisi yendalo, ukumelana nokugqwala kwendlala.
Imodeli yemveliso ephambili: i-iron oxide emnyama: 330,722
Imodeli yemveliso ephambili: i-iron oxide red: H110, Y101, H130, H101, H190, njl .;
Mthubi we-Iron oxide